सकारात्मक हुनुहोस् : यो समय पनि जानेछ ! | Kendrabindu Nepal Online News
5763441 355956 2930069 2477416
सकारात्मक हुनुहोस् : यो समय पनि जानेछ !
वर्तमान कठिन परिस्थितिमा सकारात्मक विचारलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिवक्ता एवम् मानवतावादी शान्तिदूत प्रेम रावतले भिडियोका माध्यमबाट मानिसहरू माझ आफ्नो सन्देशलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँको सन्देशको केही अंश :
धेरै मानिसहरू कोरोना भाइरसका कारणले विचलित भएका छन् । उनीहरू के गर्ने के नगर्ने भनेर भ्रमित भएका छन् । मेरो विचारमा यो समयमा यदि हामीले केही गर्न सक्छौँ भने ती दुईवटा कुरा छन् : एउटा त ‘कसैलाई यो रोग नसार्नुहोस्’ र अर्को ‘कसैबाट यो रोग आफूमा सर्न नदिनुहोस्’ । यति मात्र ! नलिनुहोस् अनि नदिनुहोस् । यो कसरी सम्भव हुन्छ । यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब तपाईँ अरू मानिस भएका स्थानसम्म जानुहुन्न र अरू मानिसहरू तपाईंका सामु आउँदैनन् । आइसोलेसनमा (छुट्टै) बस्नुहुन्छ, हात धुनुहुन्छ अनि स्वच्छ रहनुहुन्छ । आत्तिनु पर्ने कुनै कारण छैन किनकि आत्तिएर केही फाइदा हुँदैन । यो आत्तिने समय होइन । यो धैर्य गर्नुपर्ने समय हो । जुन तपाईंभित्रको क्षमता छ त्यसलाई हिम्मत भनिन्छ । त्यसलाई उपयोग गर्नु आवश्यक छ । आत्तिएर केही कुरा हासिल हुँदैन । केवल तपाईंले सावधानी अपनाउनुपर्छ । परिणामतः यो सङ्क्रमण तपाईंसम्म नआओस् ।
हामीभित्र त्यो क्षमता छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । जसका कारणले तपाईं यो परिस्थितिमा, यो समयलाई राम्रोसँग आनन्दका साथ बिताउन सक्नुहुन्छ । परिस्थिति राम्रो छैन । धेरै कुरा भइरहेका छन् तर पनि हृदयलाई त आनन्द नै चाहिन्छ । त्यो आनन्द बाहिरबाट आउँदैन । त्यो त तपाईंभित्रै छ । त्यसका लागि हामीले आफूले आफैंलाई चिन्नु आवश्यक छ । आफूले आफूलाई बुझ्नु जरुरी छ ।
यो परिस्थितिका कारण आफूले आफूलाई ‘यो मेरो कस्तो दुर्भाग्य’ भन्दै पछुताउनु राम्रो कुरा होइन । यो श्वास जुन तपाईंभित्र आइरहेको छ अनि गइरहेको छ –यो सृष्टिकर्ताको आशीर्वाद हो । जुन समयमा तपाईं जन्मनुभयो त्यतिखेर सबैभन्दा ठूलो कुरा तपाईंले श्वास लिनुभएको छ कि छैन भन्ने नै थियो । डराउँदैमा केही हुनेछैन । धैर्य गर्नुहोस् । यो समय पनि जानेछ । यो धैर्य गर्ने एउटा अवसर हो । सिक्ने अवसर हो । यो धैर्य भएर साहसका साथ रहने समय हो । त्यसकारण जीवित छँदै आनन्दसँग आफ्नो जीवनलाई बिताउनुहोस् । आफ्नो परिवारसँग मिलीजुली रहेर यो समयलाई बिताउनुहोस् ।
(प्रेम रावत मानवता एवम् शान्तिका विषयमा चर्चा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता हुनुहुन्छ । उहाँलाई यस कार्यका लागि थुप्रै संस्थाहरूद्वारा शान्तिदूतको उपाधि पनि प्रदान गरिएको छ । आफ्नो सन्देशको चर्चाका अतिरिक्त उहाँले “द प्रेम रावत फाउन्डेसन” नामक एउटा परोपकारी संस्था पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ । यस संस्थाका थुप्रै कार्यक्रमहरूमध्ये “जनभोजन” पनि एक हो । यसले अति विपन्न मानिस तथा बालबालिकालाई दैनिक रूपमा पोषणयुक्त भोजन र सफा पिउने पानी उपलब्ध गराउने गरेको छ । उहाँको सन्देशका बारेमा थप जानकारीका लागि www.premrawat.com र प्रतिक्रियाका लागि agps@mos.com.np लाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।)
prem rawat, यो समय पनि जानेछ, सकारात्मक हुनुहोस्
Prevझापामा दुबइबाट फर्किएका एक जनामा ‘एन्टीबडी पोजेटिभ’
बाँच्नु होला तर जोगिन गाह्रो पर्ला त्यसैले ‘प्लिज ! स्टे होम’Next